Semalt: Ireo karazan-tsoratra momba ny fanorotoroana tokony ho fantatrao
Tany am-piandohan'ny fikarohana fikarohana, ny webmasters dia nahatsikaritra fa ny fampiasana teny fanalahidy amin'ny backlinks ary ny lahatsoratra fanonganam-piraketana dia hanampy ny tranonkala ho tsara kokoa amin'ny sehatry ny fikarohana. Google dia tsy afaka manamarina ny votoatin'ny tranonkala isan-karazany, noho izany dia miankina amin'ireo famantarana ireo mba hampitomboana na hampihenana ny fisian'ny tranonkala iray.
Frank Abagnale, Semalt Mpitarika Success Manager, dia nanamarika fa toy ny tetika sy fomba fanao samihafa SEO dia lasa ampahany manan-danja amin'ny tranok'asa momba ny fandraharahana ny lahatsoratra fanoratana
Fanavaozana ny lahatsoratra sy ny fanavaozana ny Penguin:
Ny pingvin 2.0 dia resahina hatrany amin'ny vondrom-piarahamonina SEO sy amin'ny media sosialy, ary lasa malaza satria mifantoka amin'ny lahatsoratra endri-tsoratra. Tamin'ny taona 2016, Google dia nandany ny rindran-tserasera tamin'ireo tranonkala izay nampiasa ireo teny fanalahidin'ny fampiroboroboana ho endri-tsoratra farany ary mametraka ny rohy amin'ny tranonkala spam. Eto izahay dia niresaka momba ireo karazana lozisialy fito izay tsy tokony hisoroka ny sainan'i Google.
1. Ny EMD dia mampiasa hatramin'ny 60% amin'ny vatofantsika mifanohitra tsy misy sazy:
Misy tranonkala sasany, miaraka amin'ny marika na ny anaran'ny sehatra toy ny vola, dia mihoatra ny enimpolo isan-jaton'ny vatofantsika mifangaro, ary ny ampahany tsara indrindra dia tsy hahatonga ny sambofiara hitarika mankany amin'ny sazy fikarohana.
2. Ny EMD dia mampiasa 1 hatramin'ny 3% amin'ny vatofantsika mifanaraka:
Azo antoka ny filazana fa ny tsy fampiasana EMD dia mampiasa iray fotsiny ho telo isan-jato amin'ny vatofantsika mifanitsy. Ohatra, raha toa ka tsy mitovy amin'ny anarana na ny sehatra ny tenimiafina "vola" azonao, dia mety ho ambany na mitovy ho an'ny telo isan-jato ny isan'ireo vatofantsika. Ny ankamaroan'ny toerana dia manatanteraka ny paikady isan-karazany amin'ny fomba tsara kokoa; Ho an'ity, dia mametaka ireo teny fanalahidy voatonona miaraka amin'ny andian-teny sy ny dikany. Noho izany, ireo tarehimarika misy vatofantsika mifandraika amin'ny ampahany, ny lavabe amin'ny teny sy ny endri-tsoratr'izy ireo miaraka amin'ny synonyms dia miakatra hatramin'ny 50 isan-jato eo amin'ny aterineto. Raha toa ka tsy mifanaraka amin'ny teny filamatra "vola" ny marika sy ny sehatra dia ny iray isan-jato isan-jato kosa dia ny ampahan-danjan'ny rohy tafiditra ho lahatsoratra fanonganana..
3. Ny URL nokarohana dia matetika ampiasaina ho vatofantsika:
Azo antoka ny mitonona fa mihamitombo isan'andro ny isan'ny URL miaraka amin'ny lahatsoratra fanonganam-bato. Ny habaka marobe (20-40%) amin'ny URL-nao dia nampiasain'ny webmasters sy bilaogera ary fantatra ho marika malaza toy ny namecheap.com (45% amin'ny URL ao amin'ny vatofantsika), smoking-cessation.com (95%) ary hotely.com (mihoatra ny 50%).
4. Ireo vatofantsika tsy manoratra dia mahalana:
Ny isan'ny vatofantsika tsy mamaritra ny diariny dia roa na dimy isan-jato fotsiny.
5. Ny vatofantsika amin'ny fiteny hafa dia karazana madinika:
Ny isan'ny teny fanalahidy amin'ny fiteny hafa ankoatra ny teny anglisy dia midina 0,3% hatramin'ny 0,7% isaky ny marika na ny domains.
6. Ny anaran'ny marika na ny teny hoe key hybrides:
Ny anarana marika sy ny teny hoe hybrids dia azo ampiasaina mba hisorohana ny sainan'i Google. Ataovy azo antoka fa ny mari-pamantarana nofidinao dia tsy manam-paharoa sy mahatalanjona.
7. Sary rohy sy alim-bolana tsara:
Ny antontan-dahatsoratra ao amin'ny rohy ny sary dia iray amin'ireo fotodrafitrasa lehibe indrindra. Tokony ampiasainao matetika izany mba ahafahana mahita ny tranokalanao amin'ny aterineto.
Ity tahiry ity dia mampiseho ny fomba fizarana ny lahatsoratra fanefitra amin'ny karazana niches. Azonao atao ny mampiasa ny iray amin'ireto fomba ireto mba hisorohana ny sazy Google sy hamolavola paikady SEO kokoa noho ny teo aloha Source .